ओलीको राष्ट्रवाद लम्पसारवाद भइसक्योः सभापति देउवा - Sainokhabar
होमपेज / समाचार / ओलीको राष्ट्रवाद लम्पसारवाद भइसक्योः सभापति देउवा
ओलीको राष्ट्रवाद लम्पसारवाद भइसक्योः सभापति देउवा
धरान । नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कम्युनिस्ट सरकार आएपछि देशमा जनताले महँगी, भ्रष्टाचार र करवृद्धिको मार खेपिरहेको बताएका छन् । त्यसको जवाफ यो उपनिर्वाचनबाट दिन आग्रह गर्दै उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वेच्छाचारी बन्दै गएको आरोप लगाए ।
मंगलबार धरानमा आयोजित उपनिर्वाचन चुनाबी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सो आरोप लगाएका हुन् । सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवाद कालापानी मुद्दामा आएर लम्पसारवादमा परिणत भएको आरोप लगाए । ‘भारतले अहिलेसम्म सुस्ता र कालापानी क्षेत्रलाई विवादास्पद भूमि मान्दै आएको थियो, उसले आफ्नो भूमि भनेको थिएन।’ उनले भने, ‘तर अहिले त नक्सा नै बनायो, यो सरकारले केही गर्न सकेको छैन। ओलीको राष्ट्रवाद लम्पसारवाद भइसक्यो।’
कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले उपनिर्वाचन प्रधानमन्त्रीलाई सच्याउने अवसर रहेको बताएका छन् । उनले वाग्लुङमा नेकपाले संघीयता नै खारेज गछौं भन्ने राष्ट्रिय जनमोर्चासँग चुनावी तालमेल गरेर जनआन्दोलनको उपलब्धि संघीयता खारेज गर्ने दिशामा अघि बढेको आरोप पनि लगाए । सभामा महेश आचार्य, विमलेन्द्र निधी, डा.रामशरण महत, भीष्मराज आङ्देङ्बे, नेत्री डिला संग्रौलालगायतले पनि बोलेका थिए।
धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुखको उम्मेदवार तिलक राईले आफु मेयरमा निवार्चित भएपछि धरान उपमहानगरपालिकाभित्रको भ्रष्टचारको पर्दाफास गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । आफुले पाउने कुनै पनि तलब, भत्ता तथा सेवा सुविधा नलिने पनि उनले उद्घोण गरेका छन् । नेकपा नेतृत्वको जनप्रतिनिधि र केही भ्रष्ट कर्मचारीहरु मिलेर उपमहानगरमा व्यापक भ्रष्टचार भइरहेको र तिलक राईले जितेर आएपछि पर्दाफास हुने डरले अनेक हत्कण्डा मच्चाइरहेको उनले आरोप लगाए ।
नेपाली कांग्रेसको वृहत आमसभामा नेकपा लगायतका नेता तथा कार्यकर्ताहरु नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका हुन् । पार्टी प्रवेश गर्नेहरुमा राजेन्द्र राई, धरान १६ का मनिष परियार, सन्तोष लिम्बु, मणि तामाङ, राजु राई, हेमराज राई, प्रकाश राई, विकाश राई, सन्तोष मगर, विषु राई, सर्मिला मोहरा, सपना महरा, मनिष अर्याल, धुर्वराज राई, समिर तामाङ, आशिष दर्नाल, प्रेम भण्डारी, होम बहादुर राई, कपिल परियार, विकास शर्मा, कूसल बुढाथोकी, सन्देश राई, अनिकेत राई, रोशन तामाङ, सुदिन राई कुशल बुढाथोकी, सुरेश तामाङ, रुविन श्रेष्ठ, श्याम महत, यसोदा महत, सुबास श्रेष्ठ, शिव लिम्बु थेवे, हेलेन राई, दिवस राई, पुना श्रेष्ठ, सृजना खेवा, प्रमिला श्रेष्ठ, गोविन्द महतो, सुमित सिंह, सन्तोष शाह, मुकेश राम, सागर शाह, दिवश पाँचकोटी, गौतम तामाङ, दिल कुमारी आचार्य लगायतले पार्टि परित्याग गरि कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । नेकपा यूवा संघका ३१ जना पनि कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । बादल लिम्बु, लिलकुमार राई, अनिल गुरुङ, सुबास राई, मनमोहन राई, मनोज राई, किरण राई, प्रेम राई, विशाल राई, अबिरल राई, शंखर मगर, पवन राई, मानिस कटुवाल, बिसन राई, किवाहंग राई, रञ्जन राई दिपेश राई, प्रशान्त लिम्बुलगायत छन् । नेकपा वाईसिएलका शिवशंकर राई, गंगा बहादुर श्रेष्ठ, चन्द्रबहादुर अधिकारी, सुदिप राई, दिपा श्रेष्ठ उमेश कालिकोटे रहेका छन् । २० नं. वडाका नेकपा पूर्व विष्णुपादुका गाविब इञ्चार्ज रुद्र बहादुर राईसहित आठ जन, नेकपाका धरान १७ का मेनुका राई, सुर्यबहादुर मोक्तान, सरु लिम्बु, गिता दाहालले पनि पार्टी प्रवेश गरेका छन् । यसैगरी नेकपाका श्याम रोक्का, अनिल राई, राजेश घिसिङ, प्रविन घिमिरे, गोविन्द महतो, मुकेश राम, सुमित सिंह, ललिता आङबुहाङ, डा. स्मृति श्रेष्ठ लगायतले कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् ।